Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo Muqdisho ka ambabaxay, xilli munaasabada caleemo saarka Madaxweynaha socoto – STAR FM SOMALIA
Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn, ayaa goor dhaw ka duulay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, kadib markii uu waxyar ku sugnaa xafladda caleemo saarka Madaxweynaha Somaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo).
Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya oo soo gudbiyay cudur daar ku aadan inuusan ku sii sugnaan karin madasha Xaflada ayaa loo soo hormariyay Khudbadii uu jeedinaayay.
Hailemariam Desalegn, ayaa u hambaleeyay Madaxweynaha cusub ee Somaliya Maxamed Farmaajo, wuxuuna sheegay dowladda Itoobiya inay diyaar u tahay wada shaqeyn dhexmarta Somaliya iyo Itoobiya.
Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya oo diyaaradii keentay Muqdisho ay taagneyd Garoonka Aadan Cadde, ayaa durba raacay diyaarada markii uu dhameeyay Khudbadiisa.
Xaflada Caleemo saarka Madaxweynaha Somaliya ayaa weli socota, waxaana madasha hada ku sugan Madaxweynaha dalka Kenya iyo Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Madax kala duwan ayaa dhiman oo jeedinaya Khudbadahooda ku aadan caleemo saarka Madaxweynaha cusub ee dalka.